OTU ESI AKPỌ SITE NA MBADAMBA - N'IHI BEGINNERS - 2019
Otu esi akpọ site na mbadamba
Enwere m ike ịkpọ site mbadamba nkume na otu esi eme ya? O zuola nke a iji nweta kaadị SIM nke onye ọrụ yana nkwado 3G na ya, ma ọ bụ ihe ọzọ achọrọ?
Isiokwu a na-akọwa otú ịkpọ oku site na mbadamba gam akporo (maka iPad, naanị m maara ụzọ maka nsụgharị dị adị nke iPad 3G, nke mbụ), na ozi bara uru banyere ịkpọ oku ekwentị site na ngwaọrụ dị otú ahụ, n'agbanyeghị nke mbadamba ihe ị na-eji. onwe
Enwere m ike ịkpọ site na mbadamba 3G?
O kwere omume, ma ọ dị mwute ikwu, ọ bụghị onye ọ bụla. Mbụ, ime oku oku ekwentị mgbe niile, dịka site na ekwentị mkpanaaka, mbadamba nkume aghaghị ịnwe nkwupụta nkwurịta okwu ọ bụghị naanị 3G, mana yana nkwado GSM.
Ma: ọbụlagodi n'ụdị ndị a na-enweghị ihe mgbochi na oku na ngwaike ngwaike, njikọ ekwentị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ - na ụdị ụfọdụ ọ na-egbochi (software ma ọ bụ ngwaike), dịka ọmụmaatụ, Nexus 7 3G mbadamba na-eji otu nkwupụta nkwurịta okwu dị ka ọtụtụ igwe, ma ịkpọ ya agaghị arụ ọrụ, gụnyere yana ntanetị ọzọ.
Na ọtụtụ n'ime mbadamba nkume Samsung Galaxy Tab na Galaxy Note nwere ike ịkpọ na-enweghị ọrụ ndị ọzọ ma ha enweelarị ngwa ngwa "ekwentị" (ma ọ bụghị ihe niile, ụfọdụ ụdị Samsung na-achọ ọrụ ndị ọzọ iji mee ka ha kpọọ).
Ya mere, ịnwere ike ịkpọ site na mbadamba nkume gị ma ọ bụrụ na onye ụkọrịrị adịworị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ nhọrọ kachasị mma ga-achọ Ịntanetị, enwere ohere dị otú ahụ, ọ ga-eme na:
Enweghi ike ime oku oku abughi na ngwa ngwa, ma enwere ya (nke kachasị mma maka nyocha, n'echiche m - w3bsit3-dns.com)
Ị nwere ike ịkpọ, ma ọ bụ naanị site na ịwụnye fọdụ ụgbọelu maka mba ọzọ.
Ikike ịkpọ oku (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụghị ozugbo ịzụta, na mgbe ịsịrị ike) na-adịkarị na mbadamba na-agba agba na MTK ibe (Lenovo, WexlerTab, Explay, na ndị ọzọ, ma ọ bụghị ihe niile). Ihe kachasị mma bụ ịnwa ịchọta ihe ha na-ede kpọmkwem gbasara mbadamba ihe mbadamba ụrọ gị na ohere ịme oku.
Na mgbakwunye, ọbụna na-enweghị ntinye ngwa ngwa nke ọzọ na mbadamba, ị nwere ike ịnwale ibudata onye na-ese okwu (dịka ọmụmaatụ, ExDialer) site na ụlọ ahịa ngwa ngwa Google Play ma chọpụta ma ọ ga - arụ ọrụ - ma eleghị anya, ma ọ bụ ụdị ụfọdụ ebe ọ ga - esi mee oku na netwọk nke netwọk adịghị egbochi n'ụzọ ọ bụla, ma naanị enweghi ngwa telephony, ọ na-arụ ọrụ.
Otu esi akpọ site na mbadamba ekwentị na iji Intanet
Ọ bụrụ na ọ pụtaghị na ọ gaghị ekwe omume ịkpọ site na mbadamba nkume gị dịka site na ekwentị mgbe niile, mana mpaghara 3G dị na ya, ị ka nwere ohere ịme oku gaa ederede na ekwentị mkpanaaka, na iji ohere Ịntanetị.
Kasị mma, na m chere, ụzọ maka nke a bụ ọtụtụ n'ime gị maara skype. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị maara na iji ya, ị nwere ike ịkpọ ọ bụghị naanị onye ọzọ na Skype (ọ bụ n'efu), kamakwa na ekwe ntị, ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla ghara iji ya.
Ọnụahịa ha dị ezigbo mma: Mkpọmkpọ 400 nke oku niile ederede na nọmba mkpanaka na Russia ga-efu gị ihe dịka 600 rubles kwa ọnwa, e nwekwara atụmatụ na-akparaghị ókè maka oku iji debe nọmba nọmba (ị ga-akwụ ụgwọ maka 200 rubles kwa ọnwa maka Internet na-akparaghị ókè na mbadamba).
Ọfọn, nhọrọ ikpeazụ, nke na-apụtaghị ịkpọ oku n'ekwentị, ma na-enye gị ohere ikwekọrịta site na olu - ndị a niile bụ otu ewu Viber na Skype na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ yiri nke a nwere ike ibudata n'efu na ụlọ ahịa Google Play.